BS Fuji – Networks – MMANIME
Special 7: Special Crime Investigation Unit Translator-AA,Kishine Encoder-Nofuka Ass file-Loki Translation page-Anime Myanmar Society Action,အမျိုးအစားဖစ်တယ် တွက်ကြည့်ကောင်းလောက်မှာပါ ________________________ ခုချိန် ဝူဟန်ကြောင့် အိမ်တွင်းပုန်းနေတယ်otakuလေးတွေ ကြည့်ဖို့ ကျန်တော် Ams အသင်းသားများမှComplete series တစ်ခု မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် Review-- လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းက နဂါးတွေဟာ Elvesတွေ,Dwarvesတွေ,Vampireတွေ, Homunculiတွေနဲ့ လူသားတွေရဲ့ကမ္ဘာကို အုပ်စိုးခဲ့ ကြတယ်,ပစ္စုပ္ပန်ကာလမှာတော့ နဂါးတွေကရှိနေပေ မဲ့ ပျောက်ကွယ်နေခဲ့တယ် ဒါကြောင့် ကျန်ခဲ့တဲ့ မျိူးနွယ်တွေက အတူတူနေထိုင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပြီး လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့ပုံစံအတိုင်း ဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ် 2×19ခုနှစ်မှာရောက်တဲ့အချိနမှာတော့ Tokyoဟာ အငြိမ်းချမ်းဆုံးနေရာ ဖြစ်လာခဲ့တယ် ဒါပေမဲ့ "Nine"လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဟာ နဂါးတွေရဲ့ စွမ်းအားတွေကိုရယူဖို့နဲ့ ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက် ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေကို ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ် တစ်ဖက်မှာလည်း Nineအဖွဲ့ကို ယှဉ်နိုင်ဖို့အတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းပဲ သာမန်လူသားတွေထက် သာလွန်တဲ့ စွမ်းရည်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိသူတွေကို စုစည်းပြီးတော့.... Special Crime Investigation Unit- Special7ဆိုတဲ့အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်,အဲ့ဒီအဖွဲ့ထဲကို Seiji Nanatsukiဆိုတဲ့ ကောင်လေး ရောက်လာခဲ့ပြီး Nineအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကို သူ့ရဲ့သန့်စင်တဲ့စိတ်နဲ့ တည့်မတ်တဲ့ အတွေးခေါ်တွေကို အသုံးချ ပြီးဖြေရှင်းခဲ့တယ် အဲ့ဒီလိုမျိူးအခက်ခဲဆုံးအခြေအနေတွေမှာ တရားမျှတမှုကို ရှာဖွေနိုင်မလားဆိုတာကိုတော့..... Special -12 Special-11 Special-10 Special-9 Special-8 Special-7 Special-6 Special-5 Special-4 Special-3(link) Special-2;3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=645862476250711&id=100024808929137 Special-1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=138821200811403&id=107172733976250
Kakuriyo -Bed & Breakfast for Spirits- (Kakuriyo no Yadomeshi) ဒီ Anime လေး က .. လူ သား ကောငျ မ လေး တဈ ယောကျ ကို ဘီ လူး ဘု ရငျ က သ တို့ သ မီး အ ဖွဈ နဲ့ Ayakashi လေး က ကို ချေါ သှား တဲ့ ဇာတျ လမျး လေး ဖွဈ ပါ တယျ ပေါငျး စုံ တဲ့ Ayakashi တှေ Youkai တှေ ကို တှေ့ မွငျ ရ မှာ ဖွဈ ပွီး ဘီ လူး ဘု ရငျ ရဲ့ Ro တတျ ပုံ တှေ ကို ...
Just Because! Just because! Genre : Slice of life, drama, romance, school Episodes : 12 Rating : 7.36 ဒီကားလေးရဲ့reviewလေးကတော့တိုတိုလေးပါဘဲ ဆောငျးရာသီနှဈအထကျတနျးကြောငျးတဈကြောငျးမှာတော့ အထကျတနျးဒုတိယနှဈကြောငျးသား‌ကြောငျးသူတှဟောတတိယနှဈကိုတကျရောကျဖို့စတငျပွငျဆငျနပေါတယျ Eita izumiဆိုတဲ့ကောငျလေးဟာဖခငျရဲ့အလုပျ‌ကွောငျ့ဟာ အလယျတနျးကတညျးနှဈကတညျး ကကြောငျးပွောငျးသှားခဲ့ရပွီးနောကျသုံးနှဈအကွာ အထကျ‌ဒုတိယနှဈပွီးခါနီးမှာ သူယခငျတကျခဲ့တဲ့ကြောငျးကိုဘဲ တဈဖနျပွနျလာခဲ့ပါတယျ သူရောကျရှိခနျြမှာတော့ ကြောငျးကွီးဟာသူတကျခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘဲအရာရာပွောငျးလဲနတောကိုသူသိခဲ့ရပွီး သူနဲ့အဆကျအသှယျရှိတဲ့Haruto Sōmaကလှဲပွီးသူ့အရငျသူငယျခငျြးတှဟော သူ့ကိုမမှတျမိတော့သလို သူကလညျးမမှတျမိတော့ပါဘူး ဒီလိုနဲ့ဘဲ သူရဲ့ လကျကနျြကြောငျးသားဘ၀ကို အဲ့ကြောငျးမှာဘဲတကျရောကျပွီး ဘ၀နစေ့ဉျဖွတျသနျးရပုံကိုမွငျရမှာပါ အပိုငျးအနနေဲ့စုစုပေါငျး12ပိုငျးရှိပါတယျ ratingကတော့16+ပါ Ep 01: https://www.mediafire.com/file/xe2l1ltq4gawy8a/%5BHorribleSubs%5D_Just_Because%21_-_01_%5B720p%5D.mp4/file Ep 02: https://mega.nz/file/qll0waYA#ETokye3nbJ52eJ5QY0b7_J028Inx7W2QHqh5znPEJnk Ep 03: https://mega.nz/file/f6xzzYbT#Z_Cw1vRe3aOPXlICyzf1UH-awPY8lC1t4BDFiZpPGYQ Ep 04: https://mega.nz/file/irYwxQSZ#4Dcb0VEZVM3QvNva0QyfX_ZbpCqjz_6R46staS1sD2U Ep 05: https://mega.nz/file/K2YQiC4Z#w3rbUpMP2tcNdMfnJE_zhLw2tMQh9aHUO2A4_xwWt-0 Ep 06: https://mega.nz/file/a7g3HaAS#Jc6Y0GML2G-gf2d3KaMnPlOhBRFpqOUqV8QzKGZwOEs Ep 07: https://mega.nz/file/O2hwxaLL#Otv-jcLRNJjOdKDdRwRlgZNwZJCDgUdnlqRP6nejdiQ Ep 08: https://mega.nz/file/Kvg3zarY#_fH1p59btPiyd36CtbJeSBbZTg0t7IEamnqoUFyDL_E Ep 09: https://mega.nz/file/7zhBXKpB#jSxKgeqLsuwkzJe76fwzeTM7j38jvWMXRrXhVLgB38w Ep 10: https://mega.nz/file/fy511ApI#erzG6kjny1cv2VflPYMN54uUieRhGZmintaKcRsf_l4 Ep 11: ...